ပိန်ပိန်သေးသေး ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေအတွက် ကျန်းမာစွာ ကိုယ်အလေးချိန်တတ်စေမယ့် နည်းလမ်းတစ်ချို့ - Lifestyle Myanmar
Home Health & Beauty ပိန်ပိန်သေးသေး ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေအတွက် ကျန်းမာစွာ ကိုယ်အလေးချိန်တတ်စေမယ့် နည်းလမ်းတစ်ချို့
ပိန်ပိန်သေးသေး ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေအတွက် ကျန်းမာစွာ ကိုယ်အလေးချိန်တတ်စေမယ့် နည်းလမ်းတစ်ချို့
ဆယ်ကျော်သက်တွေဟာ အစားအစာနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ကလေးတွေလိုပဲ ဇီဇာကြောင်ကြပါတယ်။ လှချင်ပချင်တဲ့ ဆယ်ကျော်သက်ကလေးတစ်ချို့က ခန္ဓာကိုယ်ဝလာမှာ စိုးရိမ်တဲ့အတွက်အစားအစာကို စားသင့်သလောက် မစားကြပါဘူး။ သို့သော် အချို့သော ဆယ်ကျော်သက်တွေဟာ ဘယ်လောက်ပဲ စားစား အရမ်းပိန်နေတတ်ပါတယ်။ ဒီလို ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေဟာ ကိုယ်အလေးချိန် ဘာ့ကြောင့် မတိုးလာရသလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါက အာဟာရချို့တဲ့မှု၊ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဇီဝဖြစ်ပျက်မှု၊ အစားအစာ ဂျီးများမှု၊ မျိုးရိုးဗီဇတို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ ဘာ့ကြောင့်ပဲပိန်ပိန် ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေအနေနဲ့ ကျန်းမာသော နည်းလမ်းနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေမှာ ကျန်းမာစွာ ကိုယ်အလေးချိန်တိုးခြင်းနှင့် သူတို့ရဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းညှိနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းအချို့အကြောင်းကို ပြောပြချင်ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်အဆီနှင့် ကျန်းမာတဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်
ကျန်းမာစွာ ကိုယ်အလေးချိန်တိုးခြင်းနှင့် ခန္ဓာကိုယ်အဆီစုဆောင်းခြင်းက လုံးဝကွဲပြားခြားနားတဲ့ အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ မေမေတို့ရဲ့ ဆယ်ကျော်သက် သမီးလေး (သို့) သားလေးဟာ ပိန်လှီနေရင် သူတို့ကို အဝလွန်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ကိုယ်အလေးချိန် တတ်စေလိုပါလိမ့်မယ်၊ ဒါ့ကြောင့် ကျန်းမာစွာ ကိုယ်အလေးချိန်တိုးခြင်းနှင့် ခန္ဓာကိုယ်အဆီ စုဆောင်းခြင်းအကြား ကွာခြားမှုကဘာလဲဆိုတာ သိထားရပါမယ်။
သကြား၊ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်နှင့် အဆီအဆိမ့်တွေများတဲ့ အစားအစာကို စားတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်ကအဆီ စုဆောင်းပါတယ်။ ဥပမာ- ကြော်ထားတဲ့ အစားအစာများ၊ ရေခဲမုန့်၊ ဖုတ်ထားတဲ့ အစားအစာများ၊ ဆိုဒါတို့ဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကို စွမ်းအင်နှင့် အာဟာရတွေ ပေးစွမ်းသော အဆီနည်း အသား၊ ငါးနှင့် ဥများကဲ့သို့သော ပရိုတိန်းများနှင့် အစေ့အဆန်၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ ကဲ့သို့သော complex ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် အစားအစာများကို စားခြင်းက ကျန်းမာစွာ ကိုယ်အလေးချိန် တိုးစေပါတယ်။
ကျန်းမာစွာ ကိုယ်အလေးချိန် တိုးခြင်းက ကြွက်သားထုထည်နှင့် ခွန်အားကို တိုးပွားစေပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အဆီက နေရာလွတ်ဝင်ယူရုံသာဖြစ်ပြီး ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုကို ခက်ခဲစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ခန္ဓာကိုယ်အဆီက ခန္ဓာကိုယ်ကို ပွယောင်းယောင်း ပုံပေါက်စေချိန်မှာ ကြွက်သားထုထည်က သိပ်သည်းပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကို ကျစ်လစ်တဲ့ပုံပေါ်စေပါတယ်။ ကျန်းမာသော ကိုယ်အလေးချိန်တိုးခြင်းက မေမေတို့ရဲ့ ဆယ်ကျော်သက်ကလေးအား ပိုကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး အားအင်ပြည့်ဝစေပါတယ်။
ဆယ်ကျော်သက်တွေအတွက် အကောင်းဆုံး ကိုယ်အလေးချိန်က ဘာဖြစ်မလဲ?
ဆယ်ကျော်သက်ကလေးရဲ့ သင့်လျော်တဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်က အရပ်အမြင့်နှင့် အချိုးကျနေသင့်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အသင့်တော်ဆုံး ကိုယ်အလေးချိန်ကို BMI (သို့) body mass index နဲ့တွက်ချက်ပါ။ BMI ရာခိုင်နှုန်းက လူတစ်ယောက်ဟာ ကျန်းမာတဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်လား၊ ပုံမှန်အောက် လျော့ကျနေလား၊ အိုဗာဝိတ်ဖြစ်နေလား ဆိုတာကို ပျမ်းမျှအားဖြင့် တွက်ချက်ပေးပါတယ်။ အချို့သော အကြောင်းရင်းတွေကြောင့် ကလေးငယ်မှာ ကိုယ်အလေးချိန် တိုးတာ၊ ကျတာ ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းနှင့်အတူ မှန်ကန်တဲ့ အာဟာရစားသောက်ခြင်းက ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေကို ကိုယ်အလေးချိန် အလွန်အကျွံ တိုးခြင်း၊ ကျခြင်းမဖြစ်စေသလို ကျန်းမာကြံ့ခိုင်နေစေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဗိုက်သားတစ်ဝိုက်မှာ အဆီတွေနဲ့ အဝလွန်တဲ့သူတွေဟာ နှလုံးရောဂါ ၊ ဆီးချိုရောဂါ အမျိုးအစား(၂) နှင့် လေဖြတ်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန် မပြည့်သူတွေမှာ အရိုးကျိုးလွယ်ခြင်း၊ မျိုးပွားမှု ပြဿနာများနှင့် သွေးအားနည်းရောဂါများ ရှိစေပါတယ်။
ကိုယ်အလေးချိန် မပြည့်ခြင်းရဲ့ ဆိုးကျိုးများ
ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းက ကိုယ်အလေးချိန်တိုးခြင်းလိုပဲ ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အောက် ကိုယ်အလေးချိန်လျော့နည်းခြင်းက ကျန်းမာရေးပြဿနာများစွာကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်းကို မမေ့ပါနဲ့နော်။
ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့် အားနည်းခြင်း- ကိုယ်အလေးချိန်မပြည့်တဲ့ ဆယ်ကျော်သက်တွေဟာ အားနည်းပြီး အမြဲတမ်း မောပန်းနေတတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူတို့မှာ ကိုယ်ခံအားစနစ် အားနည်းပြီး ရောဂါတွေကို ပိုကြုံရစေပါတယ်။
ကိုယ်ခံအားစနစ် အားနည်းခြင်း – ကိုယ်အလေးချိန်မပြည့်တဲ့ ဆယ်ကျော်သက်တွေဟာ ကိုယ်ခံအားစနစ် အားနည်းပါတယ်။ ပိန်လှီနေတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်တွေဟာ ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် တုပ်ကွေးဖြစ်လွယ်ပါတယ်။
အရိုးကျိုးလွယ်ခြင်း – ကိုယ်အလေးချိန် မပြည့်တဲ့သူတွေဟြာ လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓါတ်များ၊ အထူးသဖြင့် အရိုးထုထည်ကို တိုးစေတဲ့ ကယ်လစီယမ်များ ကင်းမဲ့နိုင်ပါတယ်။ ကယ်လစီယမ် ချို့တဲ့ခြင်းက အရိုးတွေကို အားနည်းစေပါတယ်။ ပြုတ်ကျတာတို့ ၊ချော်လဲတာတို့ ဖြစ်လာရင် အရိုးကျိုးသွားနိုင်ပါတယ်။
သွေးအားနည်းခြင်း – ဆယ်ကျာ်သက်အရွယ်မှာ ကိုယ်အလေးချိန်မပြည့်ပါက သံဓါတ်နည်းပြီး သွေးနီဥအရေအတွက်ကို လျော့နည်းသွားစေကာ သွေးအားနည်းရောဂါကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သွေးအားနည်းတဲ့အခါ နှလုံးက အောက်စီဂျင် အလုံအလောက်မရတာကြောင့် အသက်ရှူကျပ်ခြင်း၊ နှလုံးတုန်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ကြာရှည်သွေးအားနည်းပါက လေဖြတ်စေနိုင်ပါတယ်။
မျိုးပွားခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများ – ပေါင်မပြည့်ခြင်းက ဆယ်ကျော်သက် သမီးငယ်တွေမှာ ရာသီလာခြင်းသံသရာနှင့် မျိုးပွားခြင်းကိုတောင် သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ပေါင်မပြည့်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။
အထက်ပါအချက်များအပြင် ကိုယ်အလေးချိန်မပြည့်တဲ့ ဆယ်ကျော်သက်တွေဟာ အရိုးပွရောဂါ၊ ပန်းနာရင်ကျပ်၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှင့် အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများတွင်လည်း အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။
Previous articleကလေးငယ်တွေ ပြောလို့ဆိုလို့ မရနိုင်လောက်အောင် ဆိုးသွမ်းနေတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ?
Next articleခြောက်သွေ့ကြမ်းတမ်းတဲ့ ဆံသားတွေအတွက် ထိရောက်မှုရှိတဲ့ အိမ်လုပ်ပျော့ဆေးများ